ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ် ( ၁၀ ) စင်းb - Myanmar News Plus
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ် ( ၁၀ ) စင်းb
April 24, 2018 By Myanmar Pyi Thar in စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း, နိုင်ငံတကာ Tags: ဂျက်လေယာဉ်
လူတော်တော်များများ အများသုံးလေယာဉ်ပေါ်မှာတော့ စီးနင်းလိုက်ပါဖူးကြပါတယ်။ လေဆိပ်ကို နာရီနဲ့ချီပြီး ကြိုရောက်နေရမယ်။ အကြာကြီးစောင့်ပြီးမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုဖြတ်ကျော်ပြီး လေယာဉ်ပေါ်တက်ရတာပါ။ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်လည်း ပျောက်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်း သက်တောင့်သက်သာမရှိလှတဲ့ထိုင်ခုံမှာထိုင်ရပြီး ဘေးမှာလည်း ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ခရီးသည်နဲ့တွဲထိုင်ရမှာပါ။ ဘယ်လောက်တောင် ကံကောင်းလိုက်သလဲလို့။
ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အထက်ပါအကြောင်းပြချက်တွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဝယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေပါပဲ။ လျင်မြန်မှုဟာ လွန်စွာအရေးပါနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်တစ်စင်းပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ရပ်ပဲလေ။ လေယာဉ်တစ်စင်းလုံးကို ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပိုင်ပြီး ကိုယ့်အကြိုက်အားလုံးတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးကြည့်ရုံနဲ့တင် တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပါ။ အခုဖော်ပြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်တွေကို အဆင့်မြင့်မြင့်ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပေါ့။
၁၀. Boeing 737 – ဈေးနှုန်း – ဒေါ်လာ သန်း ၈၀
အမည်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့ ယူအက်စ်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒီ ဘိုအင်း ၇၃၇ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က အာရှ စီးပွားရေးနဲ့ လေယာဉ်ပျံသန်းရေးဆိုင်ရာပြပွဲမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ လေယာဉ်ရဲ့ ကြမ်းခင်းဈေးက ဒေါ်လာ ၅၇ သန်းသာရှိခဲ့ပေမယ့် ပိုပြီး ဆန်းသစ်စေဖို့အတွက် အတွင်းပိုင်းပြုပြင်မှုတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ အထိတစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီလောက်ဈေးကြီးပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဘာတွေပြန်ရသလဲဆိုတော့-
ဒီလေယာဉ်ဟာ လူ၁၉ယောက်အထိဆန့်ပြီး လူ ၈ယောက်ကတော့ အိပ်စက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာလိုက်ပါနိုင်မယ့် အိပ်ရာအစုံအလင်ပါပါတယ်။ နှစ်ယောက်အိပ် မွေ့ယာအကြီးစားကြီးအပြင် ပစ္စည်းကိရိယာအပြည့်အစုံနဲ့ မီးဖိုချောင်၊ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ရေချိုးခန်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမအပြင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှုနဲ့ ဂြိုဟ်တုစလောင်းကနေ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လိုင်းတွေအားလုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၉.Airbus A319 Corportate Jet – ဈေးနှုန်း $ ၈၀.၇ သန်း
Airbus ကုမ္ပဏီဟာ ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ Airbus A319 ကတော့ သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့အထဲမှာ ဒုတိယဈေးအကြီးဆုံးဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ပြီးသား ကြမ်းခင်းဈေးက ဒေါ်လာ ၈၀.၇ သန်းကျသင့်ပြီး နောက်ထပ်သန်းပေါင်းများစွာ ထပ်မံတပ်ဆင်စရာ ပစ္စည်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ လေယာဉ်တစ်စင်းမှာ လူ၈ယောက်လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၈. ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Boeing 757- ဈေးနှုန်း- ဒေါ်လာ သန်း၁၀၀
အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကောင်းသတင်းနဲ့ ကျော်ကြားသူပါ။ ဒီအောင်မြင်တဲ့ ဘီလီယံနာသူဌေးကြီးဟာ Microsoft ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပေါလ် အဲလန်ဆီကနေတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုအပေါ်ငွေကြေးအမြောက်အများအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ သက်တောင့်သက်သာပိုရှိတဲ့ ဂျက်လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
ထရမ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ထဲမှာ ရွှေကွပ်ထားတဲ့ စားပွဲ၊ထိုင်ခုံခါးပတ်အပြင် ရွှေကွပ်ထားတဲ့ ဘေစင်နဲ့ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတွေပါ ပါဝင်ပါတယ် အခြားဇိမ်ခံဂျက်လေယာဉ်တွေမှာလည်း ပါဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ နှစ်ယောက်အိပ် အိပ်ရာကြီးအပြင် ထရမ့်က ဗီဒီယိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် အခန်းကိုလည်း ၅၂ လက်မ တီဗီကြီးထည့်သွင်းပြီး အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံပုံစံဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
၇. တိုင်လာ ပယ်ရီပိုင်ဆိုင်တဲ့ Gulfstream III – ဈေးနှုန်း- ဒေါ်လာ ၁၂၅သန်း
အမေရိကန် ပရိုဂျူဆာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ တိုင်လာပယ်ရီဟာ သူ့လေယာဉ်ကို သူ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့လေယာဉ်ကို ပျံသန်းနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံလို့အမည်ပေးခဲ့ပြီး ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်တွေပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ပြစက်တွေ၊ ကြီးမားတဲ့ စာကြည့်တိုက်နဲ့ လေယာဉ်ပျံသန်းနေစဉ် ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာလိုချင်တဲ့ အနေအထားရဖို့အတွက် သာမန်ပြတင်းပေါက်မှန်တွေအစား အီလက်ထရောနစ်စနစ်နဲ့ အလင်းအမှောင်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မှန်တွေကို တပ်ဆင်ထားတာပါ။ ဒီလေယာဉ်ရဲ့ကြမ်းခင်းဈေးက ဒေါ်လာ ၆၅သန်းသာ ကျသင့်တာမို့လို့ ဘယ်လောက်ထိအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံထားလဲဆိုတာကို တွက်ဆကြည့်လို့ရပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်စာရင်းဝင်ဖြစ်လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆. Joseph Lau ရဲ့ ဒေါ်လာ ၁၅၃သန်းတန် Boeing 747-81 VIP ဂျက်လေယာဉ်
ဒီလေယာဉ်ရဲ့များပြားလှတဲ့ ဈေးနှုန်းအပြင် သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့်ပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူချမ်းသာတွေကို လှုပ်ခတ်စေခဲ့တာပါ။ ပြင်ဆင်ပြီးသား လေယာဉ်တစ်စင်းကို ဒေါ်လာ ၁၅၃ သန်းကျသင့်ပြီး ဒီလောက်ထိအကုန်အကျခံနိုင်သူတွေကတော့ ဒီဈေးနဲ့တင်ရပ်တန့်မသွားဘဲ ကောင်းကင်မှာပျံသန်းနေတဲ့ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အထိကို ထပ်ပြီးမွမ်းမံကြဦးမှာပါ။
ဒီလူချမ်းသာတွေထဲမှာမှ ဟောင်ကောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဂျိုးဇက်လောင်က ဒီလေယာဉ်ကိုဝယ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
Dreamliner လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီလေယာဉ်မှာ အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုအများစုဟာ လက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အပေါ်ထပ်ကိုတက်ဖို့အတွက် ကြောင်လိမ်လှေကားပါ ပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ လေယာဉ်တွေထဲက အလှဆုံးလေယာဉ်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
၅. ရိုမန် အာဗရာမိုဗစ်ခ်ျပိုင်ဆိုင်တဲ့ Boeing 767- 33A/ ER- ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀-၁၇၀
ရိုမန် အာဗရာမိုဗစ်ခ်ျဆိုတာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးစာရင်းဝင်အရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူစိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ရွက်လှေစာရင်းထဲမှာ ဒုတိယချိတ်ပြီးတဲ့သူက အခုဆိုရင် ဒီလေယာဉ်စာရင်းထဲမှာလည်း နံပါတ်ငါးဖြစ်လာပြန်ပါပြီ။ ပေတစ်သောင်းအမြင့် ကောင်းကင်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရတာလောက် ဘယ်အရာကပိုပြီး ဇိမ်ခံရာကျပါဦးမလဲ။
ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ကို အိမ်နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတူအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ သူ့ရည်မှန်းချက်ပါ။ ရိုမန်ရဲ့အိမ်နဲ့တူအောင် ဆိုတာကလည်း သင်တွေးထားတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်မှာ လူအယောက် ၃၀ဆန့်တဲ့ ထမင်းစားခန်းပါဝင်ပြီး ပစ္စည်းအကုန်အပြည့်အစုံထားရှိပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ အိပ်ခန်းကြီးလည်း ပါရှိပါတယ်။ လူ အယောက် ၃၀၀ ဆန့်တဲ့ ဒီလေယာဉ်ကြီးကို တစ်ဦးတည်းသုံးဖို့အတွက် နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘောလုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာခေါ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်သာ အသုံးပြုပါတယ်။
၄. မင်းသား Al- Waleed bin Talal ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Boeing 747-400 – ဈေးနှုန်း- ဒေါ်လာ သန်း ၂၂၀
ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့ မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Al-Waleed bin Talal ဟာ သူ့ရဲ့ အင်မတန်ဈေးကြီးလှတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကြောင့် အလွန်နာမည်ကျော်ကြားနေသူပါ။ ဒီလောက်အထိ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအပေါ်အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့သူဟာ ဒီစာရင်းမှာ ဘာလို့ နံပါတ် ၄ အဆင့်ပဲချိတ်သလဲဆိုတော့ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ဈေးပေါတဲ့လေယာဉ်ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ဗျာ ။
သူ့မှာ ဒီထက်ပိုပြီးဈေးကြီးတဲ့ တစ်စင်းရှိပြီး အဲဒါကတော့ ဒီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၂ မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်ဟာ အစက လူအယောက် ၄၀၀ ဆန့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မင်းသားကတော့ အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီး အားလုံးအသစ်ပြန်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ ဒီအဆမတန်ဈေးကြီးလှတဲ့ လေယာဉ်ကို မင်းသားကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသွားချင်တဲ့အခါ သုံးတာပါတဲ့။
၃. ဘရူနိုင်းက စူလတန်စော်ဘွားပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒေါ်လာ ၂၃၃သန်းတန် Boeing 747-430
နာမည်ကျော် စူလတန်ဘုရင်ကြီးကတော့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်အထိချမ်းသာတဲ့သူဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တန်လောက်ပဲရှိတဲ့ လေယာဉ်ထဲမှာ ခရီးမသွားနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် သန်း ၁၃၀လောက်ထပ်စိုက်ထည့်ပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ ဇိမ်အကျဆုံး တတိယဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကုန်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်သလဲဆိုတော့ အရာအားလုံးကို ရွှေကွပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းနဲ့ ရေချိုးခန်းမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို ရွှေနဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ စီခြယ်ထားပြီး ရတနာသေတ္တာထဲရောက်နေသလို ခံစားရစေမှာပါ။ စူလတန်ဘုရင်ကြီးက ဘေစင်တွေကို ရွှေအစစ်သက်သက်နဲ့ပဲလုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး သူပြောတဲ့အတိုင်းလည်း တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂. Alisher Usmanov ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀-၄၅၀ တန် Airbus A340-300
ရုရှားမှာ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးဖြစ်တဲ့ ဘီလီယံနာ အဲလစ်ရှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယဈေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲလစ်ရှာရဲ့ အဖေဖြစ်သူ ဘွာရ်ခန်ကို အစွဲပြုပြီး နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီလေယာဉ်ဟာ ရုရှားမှာ အကြီးဆုံးကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားသမ္မတ ပူတင်ရဲ့ Ilyushin II-96 တောင်ပိုပြီး ကြီးမားပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြမ်းခင်းဈေး ဒေါ်လာ ၂၃၈သန်း သက်သက်နဲ့တင် ဒုတိယဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲလစ်ရှာက နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး နောက်ထပ် ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀- ၂၀၀ လောက်ထပ်ကုန်ကျအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့တင် အရှေ့က ဂျက်လေယာဉ်တွေကို ဂုဏ်ငယ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာပါ။
၁. မင်းသား Al-Waleed ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Airbus- A380- Custom – ဈေးနှုန်း – ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀
Airbus A380 က ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ပါ။ ရိုးရိုးမော်ဒယ်တစ်ခုကိုတောင် သန်း၅၀၀ တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ဒီလေယာဉ်ဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဈေးနှုန်းက အကန့်အသတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြသလိုက်တာပါ။ နံပါတ်လေးမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဈေးပေါပေါလေယာဉ်ထက် ဈေးနှစ်ဆမကပိုများပြီး အများကြီးလည်းပိုကြီးပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနံပါတ် ၅စာရင်းဝင်ဟောင်း၊ အခုလက်ရှိလည်း နံပါတ် ၅၀စာရင်းဝင်နေသေးတဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျ မင်းသားဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူမတူအောင်ကို သုံးဖြုန်းတတ်သူပါ။ Airbus ကုမ္ပဏီက သူ့အတွက်သီးသန့် လေယာဉ်အခွံကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီး ဒေါ်လာသန်း ၃၅၀တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ်အထဲမှာမှ သူ့စိတ်ကြိုက်ထပ်ပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။
ကောင်းကင်ပေါ်က နိုင်ငံတော် လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဟာ အရာအားလုံးကို ရွှေချထားတဲ့အပြင် ရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပလ္လင်တစ်ခုလည်း အလယ်မှာပါဝင်ပါသေးတယ်။ ကပွဲခန်းမ၊ ရေချိုးခန်း၊ ရိုးစ်ရွိုက်ကားရပ်ဖို့ ဂိုဒေါင်၊ အလိုအလျောက်လှည့်လို့ရတဲ့ အီလက်ထရောနစ်ဖျာတွေပါတဲ့ ဘုရားဆုတောင်းခန်း စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဂျက်လေယာဉ်ကတော့ လူချမ်းသာတွေရဲ့ ခရီးသွားလာခြင်းအတွက် ဈေးအကြီးဆုံးအရာအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။
Writer – Myat Thinzar HtetCredit:Daily Hot News
ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျ ( ၁၀ ) စငျးb
လူတျောတျောမြားမြား အမြားသုံးလယောဉျပျေါမှာတော့ စီးနငျးလိုကျပါဖူးကွပါတယျ။ လဆေိပျကို နာရီနဲ့ခြီပွီး ကွိုရောကျနရေမယျ။ အကွာကွီးစောငျ့ပွီးမှ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးကိုဖွတျကြျောပွီး လယောဉျပျေါတကျရတာပါ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ကိုယျ့ရဲ့ ခရီးဆောငျအိတျလညျး ပြောကျသှားနိုငျပါသေးတယျ။
လယောဉျပျေါရောကျပွီဆိုရငျလညျး သကျတောငျ့သကျသာမရှိလှတဲ့ထိုငျခုံမှာထိုငျရပွီး ဘေးမှာလညျး ခရီးစဉျတဈလြှောကျလုံး စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစရာ ခရီးသညျနဲ့တှဲထိုငျရမှာပါ။ ဘယျလောကျတောငျ ကံကောငျးလိုကျသလဲလို့။
ငှကွေေးခမျြးသာတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ အထကျပါအကွောငျးပွခကျြတှဟော ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျဝယျသငျ့တဲ့ အကွောငျးပွခကျြကောငျးတှပေါပဲ။ လငျြမွနျမှုဟာ လှနျစှာအရေးပါနတေဲ့ခတျေကွီးထဲမှာ ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျတဈစငျးပိုငျဆိုငျထားတာလညျး ကောငျးမှနျတဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတဈရပျပဲလေ။ လယောဉျတဈစငျးလုံးကို ကိုယျတဈယောကျထဲပိုငျပွီး ကိုယျ့အကွိုကျအားလုံးတညျဆောကျထားတယျဆိုတာ စိတျကူးကွညျ့ရုံနဲ့တငျ တျောတျောပြျောဖို့ကောငျးတာပါ။ အခုဖျောပွမယျ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေတော့ ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျတှကေို အဆငျ့မွငျ့မွငျ့ပိုငျဆိုငျထားကွတာပေါ့။
၁၀. Boeing 737 – ဈေးနှုနျး – ဒျေါလာ သနျး ၈၀
အမညျဖျောပွထားခွငျးမရှိတဲ့ ယူအကျဈက စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျပိုငျဆိုငျတဲ့ ဒီ ဘိုအငျး ၇၃၇ ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျက အာရှ စီးပှားရေးနဲ့ လယောဉျပြံသနျးရေးဆိုငျရာပွပှဲမှာ စတငျမိတျဆကျခဲ့တာပါ။ လယောဉျရဲ့ ကွမျးခငျးဈေးက ဒျေါလာ ၅၇ သနျးသာရှိခဲ့ပမေယျ့ ပိုပွီး ဆနျးသဈစဖေို့အတှကျ အတှငျးပိုငျးပွုပွငျမှုတှကေို အဆငျ့မွှငျ့တငျလိုကျတဲ့အခါမှာ ဒျေါလာ သနျး ၈၀ အထိတဈဟုနျထိုးမွငျ့တကျသှားခဲ့တာပါ။ ဒီလောကျဈေးကွီးပေးလိုကျရတဲ့အတှကျ ဘာတှပွေနျရသလဲဆိုတော့-
ဒီလယောဉျဟာ လူ၁၉ယောကျအထိဆနျ့ပွီး လူ ၈ယောကျကတော့ အိပျစကျပွီး သကျတောငျ့သကျသာလိုကျပါနိုငျမယျ့ အိပျရာအစုံအလငျပါပါတယျ။ နှဈယောကျအိပျ မှယေ့ာအကွီးစားကွီးအပွငျ ပစ်စညျးကိရိယာအပွညျ့အစုံနဲ့ မီးဖိုခြောငျ၊ ကယျြဝနျးတဲ့ ရခြေိုးခနျး၊ အစညျးအဝေးခနျးမအပွငျ အငျတာနကျခြိတျဆကျအသုံးပွုနိုငျမှုနဲ့ ဂွိုဟျတုစလောငျးကနေ ခြိတျဆကျအသုံးပွုနိုငျတဲ့ လိုငျးတှအေားလုံးလညျး ပါဝငျပါတယျ။
၉.Airbus A319 Corportate Jet – ဈေးနှုနျး $ ၈၀.၇ သနျး
Airbus ကုမ်ပဏီဟာ ခတျေမီဆနျးသဈတဲ့ ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျတှကေို ထုတျလုပျရာမှာ နာမညျကွီးပါတယျ။ Airbus A319 ကတော့ သူတို့ထုတျလုပျတဲ့အထဲမှာ ဒုတိယဈေးအကွီးဆုံးဂကျြလယောဉျဖွဈပါတယျ။ ပွငျဆငျပွီးသား ကွမျးခငျးဈေးက ဒျေါလာ ၈၀.၇ သနျးကသြငျ့ပွီး နောကျထပျသနျးပေါငျးမြားစှာ ထပျမံတပျဆငျစရာ ပစ်စညျးတှရှေိနပေါသေးတယျ။
ပုံမှနျအတိုငျးပွငျဆငျထားတဲ့ လယောဉျတဈစငျးမှာ လူ၈ယောကျလိုကျပါစီးနငျးနိုငျပွီး မိမိစိတျကွိုကျပွငျဆငျမှုတှကေိုလညျး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
၈. ဒျေါနယျထရမျ့ပိုငျဆိုငျတဲ့ Boeing 757- ဈေးနှုနျး- ဒျေါလာ သနျး၁၀၀
အမရေိကနျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့ဟာ သူ့ရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ပတျသကျပွီး မကောငျးသတငျးနဲ့ ကြျောကွားသူပါ။ ဒီအောငျမွငျတဲ့ ဘီလီယံနာသူဌေးကွီးဟာ Microsoft ကိုစတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ ပေါလျ အဲလနျဆီကနတေဈဆငျ့ ဝယျယူခဲ့တာပါ။ ပွနျလညျပွငျဆငျမှမျးမံမှုအပျေါငှကွေေးအမွောကျအမြားအသုံးပွုခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျစတိုငျနဲ့ သကျတောငျ့သကျသာပိုရှိတဲ့ ဂကျြလယောဉျတဈစငျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ
ထရမျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျစတိုငျထဲမှာ ရှကှေပျထားတဲ့ စားပှဲ၊ထိုငျခုံခါးပတျအပွငျ ရှကှေပျထားတဲ့ ဘစေငျနဲ့ ရခြေိုးခနျးသုံးပစ်စညျးတှပေါ ပါဝငျပါတယျ အခွားဇိမျခံဂကျြလယောဉျတှမှောလညျး ပါဝငျလာပွီဖွဈတဲ့ နှဈယောကျအိပျ အိပျရာကွီးအပွငျ ထရမျ့က ဗီဒီယိုကွညျ့ရှုဖို့အတှကျ အခနျးကိုလညျး ၅၂ လကျမ တီဗီကွီးထညျ့သှငျးပွီး အိမျတှငျးရုပျရှငျရုံပုံစံဖွဈအောငျ တညျဆောကျထားပါတယျ။
၇. တိုငျလာ ပယျရီပိုငျဆိုငျတဲ့ Gulfstream III – ဈေးနှုနျး- ဒျေါလာ ၁၂၅သနျး
အမရေိကနျ ပရိုဂြူဆာ၊ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာဖွဈတဲ့ တိုငျလာပယျရီဟာ သူ့လယောဉျကို သူ့စိတျကွိုကျပွငျဆငျထားခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့လယောဉျကို ပြံသနျးနတေဲ့ ရုပျရှငျရုံလို့အမညျပေးခဲ့ပွီး ကွီးမားတဲ့မကျြနှာပွငျတှပေါတဲ့ ရုပျရှငျပွစကျတှေ၊ ကွီးမားတဲ့ စာကွညျ့တိုကျနဲ့ လယောဉျပြံသနျးနစေဉျ ပြျောရှငျမှုပေးနိုငျတဲ့ အရာအားလုံးပါဝငျပါတယျ။
လယောဉျပျေါမှာလိုခငျြတဲ့ အနအေထားရဖို့အတှကျ သာမနျပွတငျးပေါကျမှနျတှအေစား အီလကျထရောနဈစနဈနဲ့ အလငျးအမှောငျထိနျးခြုပျလို့ရတဲ့ အထူးပွုလုပျထားတဲ့မှနျတှကေို တပျဆငျထားတာပါ။ ဒီလယောဉျရဲ့ကွမျးခငျးဈေးက ဒျေါလာ ၆၅သနျးသာ ကသြငျ့တာမို့လို့ ဘယျလောကျထိအောငျ ပွုပွငျမှမျးမံထားလဲဆိုတာကို တှကျဆကွညျ့လို့ရပါတယျ။ အတှငျးပိုငျးမှာ တပျဆငျထားတဲ့အရာတှကွေောငျ့ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျစာရငျးဝငျဖွဈလာရတာ ဖွဈပါတယျ။
၆. Joseph Lau ရဲ့ ဒျေါလာ ၁၅၃သနျးတနျ Boeing 747-81 VIP ဂကျြလယောဉျ
ဒီလယောဉျရဲ့မြားပွားလှတဲ့ ဈေးနှုနျးအပွငျ သူ့ရဲ့အသှငျအပွငျကွောငျ့ပါ တဈကမ်ဘာလုံးက လူခမျြးသာတှကေို လှုပျခတျစခေဲ့တာပါ။ ပွငျဆငျပွီးသား လယောဉျတဈစငျးကို ဒျေါလာ ၁၅၃ သနျးကသြငျ့ပွီး ဒီလောကျထိအကုနျအကခြံနိုငျသူတှကေတော့ ဒီဈေးနဲ့တငျရပျတနျ့မသှားဘဲ ကောငျးကငျမှာပြံသနျးနတေဲ့ ရတနာတဈပါးဖွဈတဲ့အထိကို ထပျပွီးမှမျးမံကွဦးမှာပါ။
ဒီလူခမျြးသာတှထေဲမှာမှ ဟောငျကောငျစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ဂြိုးဇကျလောငျက ဒီလယောဉျကိုဝယျယူဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါ။
Dreamliner လို့အမညျပေးထားတဲ့ ဒီလယောဉျမှာ အတှငျးပိုငျးပွငျဆငျမှုအမြားစုဟာ လကျနဲ့ပွုလုပျထားတာဖွဈပွီး အပျေါထပျကိုတကျဖို့အတှကျ ကွောငျလိမျလှကေားပါ ပါဝငျပါတယျတဲ့။ ဒီစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ လယောဉျတှထေဲက အလှဆုံးလယောဉျထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။
၅. ရိုမနျ အာဗရာမိုဗဈချြပိုငျဆိုငျတဲ့ Boeing 767- 33A/ ER- ဈေးနှုနျး ဒျေါလာ သနျး ၁၂၀-၁၇၀
ရိုမနျ အာဗရာမိုဗဈချြဆိုတာ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးစာရငျးဝငျအရာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သူစိမျးမဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ရှကျလှစောရငျးထဲမှာ ဒုတိယခြိတျပွီးတဲ့သူက အခုဆိုရငျ ဒီလယောဉျစာရငျးထဲမှာလညျး နံပါတျငါးဖွဈလာပွနျပါပွီ။ ပတေဈသောငျးအမွငျ့ ကောငျးကငျထဲမှာ အလုပျလုပျရတာလောကျ ဘယျအရာကပိုပွီး ဇိမျခံရာကပြါဦးမလဲ။
ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျကို အိမျနဲ့အတတျနိုငျဆုံးတူအောငျလုပျဖို့ဆိုတာ သူ့ရညျမှနျးခကျြပါ။ ရိုမနျရဲ့အိမျနဲ့တူအောငျ ဆိုတာကလညျး သငျတှေးထားတာထကျ အမြားကွီးပိုပါတယျ။ ဒီလယောဉျမှာ လူအယောကျ ၃၀ဆနျ့တဲ့ ထမငျးစားခနျးပါဝငျပွီး ပစ်စညျးအကုနျအပွညျ့အစုံထားရှိပါတယျ။ ကွီးမားတဲ့ အိပျခနျးကွီးလညျး ပါရှိပါတယျ။ လူ အယောကျ ၃၀၀ ဆနျ့တဲ့ ဒီလယောဉျကွီးကို တဈဦးတညျးသုံးဖို့အတှကျ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျဘောလုံးအသငျးဖွဈတဲ့ ခြဲလျဆီးအသငျးကို တဈနရောကနေ တဈနရောချေါဆောငျသှားဖို့အတှကျသာ အသုံးပွုပါတယျ။
၄. မငျးသား Al- Waleed bin Talal ပိုငျဆိုငျတဲ့ Boeing 747-400 – ဈေးနှုနျး- ဒျေါလာ သနျး ၂၂၀
ဆျောဒီအာရဗေရြဲ့ မငျးသားတဈပါးဖွဈတဲ့ Al-Waleed bin Talal ဟာ သူ့ရဲ့ အငျမတနျဈေးကွီးလှတဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှကွေောငျ့ အလှနျနာမညျကြျောကွားနသေူပါ။ ဒီလောကျအထိ ဇိမျခံပစ်စညျးတှအေပျေါအသုံးအဖွုနျးကွီးတဲ့သူဟာ ဒီစာရငျးမှာ ဘာလို့ နံပါတျ ၄ အဆငျ့ပဲခြိတျသလဲဆိုတော့ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ဈေးပေါတဲ့လယောဉျဖွဈနလေို့ပါတဲ့ဗြာ ။
သူ့မှာ ဒီထကျပိုပွီးဈေးကွီးတဲ့ တဈစငျးရှိပွီး အဲဒါကတော့ ဒီစာရငျးရဲ့ နံပါတျ ၂ မှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒီလယောဉျဟာ အစက လူအယောကျ ၄၀၀ ဆနျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး မငျးသားကတော့ အတှငျးပိုငျးပွငျဆငျမှုတှအေားလုံးကို ဖယျထုတျပဈပွီး အားလုံးအသဈပွနျတညျဆောကျခဲ့တာပါ။ ဒီအဆမတနျဈေးကွီးလှတဲ့ လယောဉျကို မငျးသားကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခရီးသှားခငျြတဲ့အခါ သုံးတာပါတဲ့။
၃. ဘရူနိုငျးက စူလတနျစျောဘှားပိုငျဆိုငျတဲ့ ဒျေါလာ ၂၃၃သနျးတနျ Boeing 747-430
နာမညျကြျော စူလတနျဘုရငျကွီးကတော့ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးစာရငျးဝငျတှထေဲက တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ဒီလောကျအထိခမျြးသာတဲ့သူဟာ ဒျေါလာ သနျး ၁၀၀ တနျလောကျပဲရှိတဲ့ လယောဉျထဲမှာ ခရီးမသှားနိုငျတဲ့အတှကျ နောကျထပျ သနျး ၁၃၀လောကျထပျစိုကျထညျ့ပွီး ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးနဲ့ ဇိမျအကဆြုံး တတိယဖွဈတဲ့ ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျဖွဈအောငျ ပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလောကျပိုကျဆံတှအေမြားကွီးကုနျအောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျသလဲဆိုတော့ အရာအားလုံးကို ရှကှေပျပဈလိုကျတာပါ။ ဧညျ့ခနျး၊ အိပျခနျးနဲ့ ရခြေိုးခနျးမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှအေားလုံးကို ရှနေဲ့ ကြောကျမကျြရတနာတှေ စီခွယျထားပွီး ရတနာသတ်ေတာထဲရောကျနသေလို ခံစားရစမှောပါ။ စူလတနျဘုရငျကွီးက ဘစေငျတှကေို ရှအေစဈသကျသကျနဲ့ပဲလုပျခငျြတယျလို့ ပွောခဲ့ပွီး သူပွောတဲ့အတိုငျးလညျး တကယျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၂. Alisher Usmanov ပိုငျဆိုငျတဲ့ ဒျေါလာ သနျး ၃၅၀-၄၅၀ တနျ Airbus A340-300
ရုရှားမှာ အခမျြးသာဆုံး သူဌေးကွီးဖွဈတဲ့ ဘီလီယံနာ အဲလဈရှာ ပိုငျဆိုငျတဲ့ ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျဟာ ကမ်ဘာ့ဒုတိယဈေးအကွီးဆုံး ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အဲလဈရှာရဲ့ အဖဖွေဈသူ ဘှာရျခနျကို အစှဲပွုပွီး နာမညျပေးထားတဲ့ ဒီလယောဉျဟာ ရုရှားမှာ အကွီးဆုံးကိုယျပိုငျလယောဉျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ရုရှားသမ်မတ ပူတငျရဲ့ Ilyushin II-96 တောငျပိုပွီး ကွီးမားပါသေးတယျ။ သူ့ရဲ့ ကွမျးခငျးဈေး ဒျေါလာ ၂၃၈သနျး သကျသကျနဲ့တငျ ဒုတိယဈေးအကွီးဆုံးဖွဈဖို့လုံလောကျနပေါပွီ။ ဒါပမေယျ့ အဲလဈရှာက နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာတှနေဲ့ လုံခွုံရေးစနဈတှကေို အသုံးပွုပွီး နောကျထပျ ဒျေါလာ သနျး ၁၅၀- ၂၀၀ လောကျထပျကုနျကအြောငျ လုပျခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အရှယျအစားနဲ့တငျ အရှကေ့ ဂကျြလယောဉျတှကေို ဂုဏျငယျသှားအောငျ လုပျဆောငျနိုငျတာပါ။
၁. မငျးသား Al-Waleed ပိုငျဆိုငျတဲ့ Airbus- A380- Custom – ဈေးနှုနျး – ဒျေါလာ သနျး ၅၀၀
Airbus A380 က ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျပါ။ ရိုးရိုးမျောဒယျတဈခုကိုတောငျ သနျး၅၀၀ တံဆိပျကပျထားတဲ့ ဒီလယောဉျဟာ ဇိမျခံပစ်စညျးတှနေဲ့ ပတျသကျရငျ ဈေးနှုနျးက အကနျ့အသတျမရှိနိုငျဘူးဆိုတာကို ပွသလိုကျတာပါ။ နံပါတျလေးမှာဖျောပွခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဈေးပေါပေါလယောဉျထကျ ဈေးနှဈဆမကပိုမြားပွီး အမြားကွီးလညျးပိုကွီးပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးနံပါတျ ၅စာရငျးဝငျဟောငျး၊ အခုလကျရှိလညျး နံပါတျ ၅၀စာရငျးဝငျနသေေးတဲ့ ဆျောဒီအာရဗြေ မငျးသားဟာ ဇိမျခံပစ်စညျးတှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ သူမတူအောငျကို သုံးဖွုနျးတတျသူပါ။ Airbus ကုမ်ပဏီက သူ့အတှကျသီးသနျ့ လယောဉျအခှံကို တညျဆောကျပေးခဲ့ပွီး ဒျေါလာသနျး ၃၅၀တောငျးခံခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလယောဉျအထဲမှာမှ သူ့စိတျကွိုကျထပျပွီး ပွငျဆငျခဲ့တာပါ။
ကောငျးကငျပျေါက နိုငျငံတျော လို့အမညျပေးထားတဲ့ ဒီကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျဟာ အရာအားလုံးကို ရှခေထြားတဲ့အပွငျ ရှသေားစဈစဈနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ပလ်လငျတဈခုလညျး အလယျမှာပါဝငျပါသေးတယျ။ ကပှဲခနျးမ၊ ရခြေိုးခနျး၊ ရိုးဈရှိုကျကားရပျဖို့ ဂိုဒေါငျ၊ အလိုအလြောကျလှညျ့လို့ရတဲ့ အီလကျထရောနဈဖြာတှပေါတဲ့ ဘုရားဆုတောငျးခနျး စတာတှပေါဝငျပါတယျ။ ဒီဂကျြလယောဉျကတော့ လူခမျြးသာတှရေဲ့ ခရီးသှားလာခွငျးအတှကျ ဈေးအကွီးဆုံးအရာအဖွဈရပျတညျနပေါတယျ။
Writer – Myat Thinzar Htet